Ikhalenda yeMbewu ngo-Matshi 2018: kummandla ophakathi weRashiya, kwingingqi yaseMoscow, itafile kubalimi beloli kunye nabavelisi beentyatyambo
Ikhalenda yeMbewu kaLunar ngo-Matshi 2018: iitafile zabalimi, abalimi kunye nabalimi beentyatyambo
Ikhalenda yesityalo yenyanga yinto encedo kakhulu yokulima, i-horticulturist kunye ne-florist. Kwabo, sithathe ietafile ezilula ezibonisa iintsuku ezilungileyo zokutshala imbewu, ukuchumisa umhlaba, ukusika izihlahla nezihlahla. Ukukhalenda ngokukhawuleza kwekhalenda ngo-Matshi 2018 kuya kunceda ngexesha lokulungiselela izityalo kumadlelo, umzila ophakathi kunye nezinye iidolophu zaseRashiya. Ukwenziwa ngokufanelekileyo kwintsebenzo yasentwasahlobo kuya kuba yisiqinisekiso sokufumana amahlumela enempilo.
Ithenda yekhalenda yeMbewu ngoMatshi 2018 yabalimi kunye nabalimi
Ukulungiselela ukutyala izityalo ngo-Matshi kuthatha ixesha elide. Kodwa ukubamba kwayo kuyimfuneko yokufumana isivuno esihle. Fumana iintsuku ezona zilungileyo zokulinywa kwekhalenda kubalimi nabalimi ngoMatshi 2018 kuya kusinceda sikhethe itafile.
Inkcazo yezityalo ezichanekileyo ngo-Matshi 2018 kubadoli nabalimi etafileni
Itafile elandelayo ilungele ukusetyenziswa njengethuluzi lokusebenzisa. Kuya kubonisa iintsuku ezifanelekileyo zokuhluma, ukulima, izityalo ezichumayo. Ikhalenda elula iya kuba luncedo kubo bonke abalimi kunye nabalimi beloli.
Ikhalenda echanekileyo yokuhlwayela ngo-Matshi 2018 kubaflorisi-itafile ngeengcebiso
Ngo-Matshi, kungekhona kuphela abalimi, kodwa nabaflorisi banomsebenzi omningi. Bangayilungisa umhlaba, baqule izityalo zeentyatyambo. Ikhalenda esiyikhethile etafileni ngo-Matshi 2018 iya kuba luncedo kubalimi beentyatyambo abasebenza kwiindawo zokugcina izityalo kunye nasekhaya.
Itafile echanekileyo yokuloba ikhalenda yabaflorisi ngoMatshi 2018
Ukusebenzisa itafile echanekileyo ngokuchazwa komsebenzi kubalimi beentyatyambo ngo-Matshi, ungaqala ukutshala ii-bulbs, nezilimo eziyizigaxa kunye nembewu ngexesha. Iingcebiso ezilula zikunceda ukuqeda iingxaki ngokulungiselela umhlaba ukuhluma kweentlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo.
Ukuhlwayelwa kwekhalenda kwitheyibhile ngo-Matshi 2018 - kummandla ophakathi waseRashiya
Izimo zemozulu ezikhethekileyo kwindawo ephakathi yaseRashiya zibonisa ukuba kukho utshintsho kwikhalenda yokuhlwayela ngo-Matshi 2018. Ngokuncedwa kwetafile ekhethiweyo kuthi, bonke abaqholi beeflorists, abalimi begadi kunye neelori abalimi baya kukwazi ukulungiselela ngokufanelekileyo ixesha elitsha.
Itafile yekhalenda yeLunar yezityalo zomgca ophakathi weRashiya ngoMatshi 2018
Ukulandela ikhalenda yenyanga yezityalo kuya kwenza wonke umntu ohlala kwinqanaba laseRussia ukuba alungiselele ngokutsha ixesha elitsha. Iingcebiso ezichanekileyo ziya kunceda abalimi, abalimi kunye nabalimi beentyatyambo ngokuchanekileyo baqhuba ukulungiselela umhlaba kunye nokucebisa, ukutyala nokutyala.
Ukuhlwayelwa ngokulula kweKharityhulam ngo-Matshi 2018 kummandla waseMoscow-isicatshulwa etafileni
Abahlali baseMoscow bahlala ekuhlaleni iintlobo ezahlukeneyo. Abanikazi bamazwe abo kunye nezitiya ekuqaleni kwentwasahlobo kufuneka baqale ukulungiselela izityalo kunye nembewu. Ukuze ufumane okungakumbi malunga nantoni na imisebenzi enokuthi yenziwe ngo-Matshi 2018 ngabemi baseMoscow, ikhalenda ehlwayelwe yilethi iya kuthiwa.
Ukuhlwayelwa okulula kwekhalenda-netafile ngeengcebiso ngo-Matshi 2018 kuMmandla waseMoscow
Emva kokufunda i-ikhalenda yenyanga yeetekethi yezityalo, unokufumana ukuba yiyiphi intsuku kaMatshi 2018 eyayikulungele ukusebenza emsebenzini kwiindawo zokugcina izityalo kunye nasekhaya. Kwakhona, ulwazi oluncedo malunga nomsebenzi we-horticulturalist, umgadi wegadi kunye novelisayo ekuqaleni kwentwasahlobo, abafundi bethu baya kukwazi ukufumana i-video efanelekileyo.
Ukusebenzisa ikhalenda yenkcazo yenyanga yezityalo, intlanzi nganye, umgadi wegadi okanye umyezo wegadi uya kukwazi ukulungiselela kakuhle ixesha elitsha. Ukwenza oku, sikhethe iingcebiso ezifanelekileyo kunabemi baseMoscow, ibhande eliphakathi kunye nezinye iidolophu zaseRashiya. Ukutsalana ngokukhawuleza kwekhadi ka-Matshi 2018 etafileni kuya kubonisa iintsuku ezifanelekileyo zokulungiselela umhlaba, ukutshala kunye nezityalo ezichumisayo zezohlukeneyo.
Ukukhuselwa kwezityalo ezichasene nezifo
Thunbergia (uSyanna amehlo omnyama)
Unokunyamekela njani itende lebhanana
Izityalo zangaphandle: i-drimiopsis
Iipropati ezisetyenziswayo ze-oregano
Ukunyamekela iintyatyambo zangaphakathi: abutilone
Imveliso yezityalo zekhofi
Impembelelo yonyango lonyango emzimbeni womntu
Isitayela seLoft ngaphakathi
Inyosi yeBrazed in tomato sauce
Iipropati ezisebenzayo zeJelly
Isondlo esihle kubafazi abaqolileyo
Ikhalenda yezeMpilo: NgoJanuwari, ngoFebhuwari, ngoMatshi
Ukubonakaliswa kobugwenxa benja kumntwana
Ukuchithwa kunye nokucima abantu namhlanje
Ioli ye-Hydrophilic yokuhlamba
I-orthosis yezokwelapha kwizifo zeenyawo
I-nectar yasePinki: itiye lekhaya elimnandi kwi-petals
Indlela yokubopha ikhonkethi
Isaladi kunye ne-caramel kunye nemifuno
USergey Lazarev ubonise ividiyo yakhe yokuqala yekhaya kunye nendodana yakhe
Ubudlelwane kulo mbini ngaphambi nangemva komtshato
Amakhiwane: iindlela zendlela yokwenza unyango
Indlela yokuziphatha nomama-mkhwenkqo